LED Inokura Chiedza cheRuvara Ruchena Rwemukati China Manufacturer
Tsanangudzo:LED Kukura Bulb,LED Kupima Rambi,Dombo & Bluu LED Kukura Chiedza
 HomeProductsKukura ChiedzaKutengeserana Kukura MwenjeLED Inokura Chiedza cheRuvara Ruchena Rwemukati
Muenzaniso Nha.: GLB-300W
LED Inokura Chiedza cheRuvara Ruchena Dzvuku Rwenyika Dzakanaka
Kufambira mberi kwekwenyanzvi mune zvesayenzi mukati megetsi rekuvhenekera kwe LED kwave kutanga kubudisa zviitiko zvenyika chaiyo yezvinyorwa zvekurima uye zvekurima, zvichibvumira kuwedzera kwekugadzira nechisimba chekushandisa, kushandura kwemazinga ekushisa uye kuwedzerwa kwezvokudya zvinovaka muviri. Sezvo kushandiswa kwemari yekukwirira kwemazuva ekutanga kwema LED yakatanga kudonha, izvi zvinyorwa zvepamusoro zvakatanga kupinda mukati memushambadziro wevatengi uye isu tinozvirumbidza kupa zvigadziriswe zvigadziridzo zvekugadzirisa zvigadziro zvezvinhu zvako zvose zvinokura.
LED dzinokura magetsi dzinotapisa kupisa kupfuura HPS kukura magetsi uye inogona kuiswa pedyo nemiti yako pasina kuisa mungozi. Kuita zvishoma kudisa kunorevawo kuti unoshandisa simba shoma kuchengetedza yakakwana kutonhorera mukura kwako.
Akatungamirira Ivai Chiedza rakanakira nangananga chakarondedzera, pasi simba mari, pasina kupisa, dzakatetepa uye lightweight, refu lifespan. tinogona kukurudzira Kukura Kwedu kune ani zvake anoda kutanga miriwo yemiriwo kukurudzira kana kuchengetedza michero yeimba inofara pamusoro pechando.
Tsanangudzo yekukura Mwenje
1. Kusapindira Kuisa
2. Bhokisi reBlue Box Packing
3. Yakagadziridzwa kuisa Paki
Kushandisa mazano ekukura Chiedza
1. Inokodzera hydroponics, horticulture, greenhouse
2. Inokodzera miti inokura, maruva uye fruiting
3. Kupenya Nguva yekugadzirisa: Vegetative Stage: 12-14 maawa pa; Mutsara Stage: maawa 9-12 pamusoro. Fruiting Stage: 7- 8 maawa
4. Ongorora kure pamusoro pemiti: 1.5-2.5m
Philizon inotarisa pane LED Grow Light uye LED Kukura Aquarium Light Manufacturer China, Kutungamirirwa kwedu kwegungwa rekudzivirira uye chiedza chakasimwa kukura chiedza chinowanikwa mumakambani anotungamirirwa, zvichiita kuti maonero akanaka uye maitiro ayo akakwirira uye kukwikwidzana.
Isu tinoda kuparadzanisa kubatana newe, vatengi vedu vanokosha. Ngatishande pamwe chete uye kuchengetedza simba. Mamwe mashoko pamusoro peZvibvumirano Zvedu Mwenje, tapota tibvunzei zvakananga uye tine shumiro yekushanyira kana r company uye isu tichakusarudza iwe.
Product Categories : Kukura Chiedza > Kutengeserana Kukura Mwenje
Factory Wholesale Plant Izvo Zvitsva LED Kukura Chiedza Bata Ikozvino
LED Inokura Chiedza cheRuvara Ruchena Rwemukati Bata Ikozvino
300W Yakarongedza Kuwedzera Mwenje yeHorticulture Medical Plant Bata Ikozvino
Kuuya Kutsva Full Spectrum Veg / Bloom LED Kukura Chiedza Bata Ikozvino
Samsung 561B Kura Kamuri neLed Mwenje Bata Ikozvino
Nyowani Nyowani Horticultural Taa Yakatakura Mwenje Bata Ikozvino
Greenhouse Inotakurwa Mwenje Yekutengesa Bata Ikozvino
MaGreenhouse Akagadziridzwa Akakura Ekudza Chiedza Cob 3000w Bata Ikozvino
LED Kukura Bulb
LED Kupima Rambi
Dombo & Bluu LED Kukura Chiedza
LED Kukura Rambi
LED Kukura Panel Lambi
LED COB Kukura Rambi
LED Kukura Chiedza Purple